Midziyo Vagadziri & Vatengesi - China Supplies Fekitori
Humidity chiratidzo kadhi inogadzira yakagadziridzwa 6-poindi humidity kadhi kuchengetedza kwezvakatipoteredza
Humidity chiratidzo kadhi inzira iri nyore uye yakachipa yekuona humhutu hwezvakatipoteredza. Mushandisi anogona kukurumidza kutonga tembiricha mukati meiyo chigadzirwa package uye mhedzisiro ye desiccant nemuvara pane kadhi. Kana hunyoro hwepakeji hwakwira kupfuura kana hwakaenzana nehunhu hwehunhu, poindi inoenderana pakadhi inozoshanduka kubva pavara rakaoma kuita runyoro rwakanyorova, nekudaro mashandisiro eiyo desiccant anogona kuzivikanwa zviri nyore.
3 G 5 g 10 g 100 g silica gel yakajeka granule desiccant
High chengetedzo uye hapana ngura. Inokodzera isina-guruva uye isina-static kurongedza. Izvo zvigadzirwa zvinosangana nemauto eU.S.mil-d-3464e, inova sarudzo yakanaka kune semiconductor uye microelectronics maindasitiri. Inogona kuve yakagadzirirwa maererano nezvinodiwa nevatengi.
Nylon bhegi bhegi girazi rinoonekera chipo mupunga chikafu epurasitiki bhegi nyowani yekuchengetedza epurasitiki yekuisa bhegi inogona kugadzirwa
Fh001 zvinhu zvenaironi Vacuum bhegi firimu rudzi rinoumba zvinhu izvo zvakabatanidzwa ne biaxial tensile BOPA firimu uye CPE firimu kuburikidza neakaoma rinoumbwa maitiro. Iyo ndiyo inonyanya kushandiswa zvinhu zvekuchenesa muChina. Ichi chigadzirwa chine anti-static basa, yakanaka kubuda, kuita pachena, kukwirira kweoksijeni kugona, kuita kwakanaka kwehunyoro, kugona kwakasimba uye kupisa kuramba, kuvhara chisimbiso kuri nyore, kuvhara zvakanaka nekukwegura kuramba.
Tsvuku antistatic bubble firimu bubble firimu wholesale furo firimu kuvhunduka nemishonga furo fekitori yakananga Wholesale
Iyo yakasanganiswa anti-static bubble bhegi yakagadzirwa nekambani yedu inozadza nezvikanganiso zvemumba anti-static bhegi (akawanda anti-static bubble mabhegi haana kuumbika, nyore kudonha mushure menguva yakareba, uye anti-static kuvhunduka kwekutora yekumisikidza buffer kuita murombo). Chigadzirwa chine maviri-marongero mamiriro: yekunze PE inoitisa firimu, pamusoro pekupokana kukosha ndeye 108 ~ 1010'Ω, Iyo yemukati layer yeanti-static bubble bhegi, iyo yepamusoro kuramba kukosha ndeye 108 ~ 1010'Ω.
Mutsvuku Wekutsvuka, Chiso Mask Machine, Mask Mugadziri, Anti Static Bubble Mucheka, Imwe Dhonza Imwe Mask Machine, Kavha Bubble Bhegi,